Sarany orinasa | Ekipan'i CHUNKAI
Tanjon'ny orinasa: miompana amin'ny serivisy, ny mpanjifa aloha
Momba ny serivisy, mpanjifa aloha.
Ataovy loha laharana foana ny mpanjifa.
Ampioreno ny fiheverana ny hoe "Maximization déximisement des clientes".
Mieritrereta amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa, manolora kalitao tsaratsara kokoa, vokatra maharitra sy azo ovaina ho an'ny mpanjifa.
Fifanarahana sy sorona ny tombotsoantsika mba hiantohana ny fanatsarana ny tombotsoan'ny mpanjifa.
Misiona orinasa: orinasa lehibe indrindra eto an-tany vahaolana vahaolana
Miaraka amin'ny fampivoarana ny orinasan'ny orinasa, ny orinasa dia niova tamim-pahombiazana tamin'ny maodely an-tserasera tokana ho lasa modely tafiditra an-tserasera sy ivelan'ny serasera, noho izany ny fahatongavany ho orinasa fandraketana an-tserasera voalohany any Shina dia tsy afaka mamaly ny filan'ny orinasa ankehitriny intsony, ary lasa fonosana lehibe indrindra manerantany Ny orinasa vahaolana dia nanjary laharam-pahamehana. Avy any Chine, amin'izao tontolo izao.
Mankasitraka an-trano, omeo valisoa ny fiaraha-monina, manohy mampiroborobo ny fampandrosoana ara-pahasalamana ny tontolo tontolo maitso
Ny tanàna nahaterahana no toerana malemy indrindra, ilay antsoina hoe "loharano", na dia be atao aza isika isan'andro, nefa tsy manadino ny toerana nahaterahany. Ny tena "fahasoavana mahalala" dia avy amin'ny fo, mikoriana ny ràn'olombelona, ​​dia karazana famoahana voajanahary sy voajanahary. Ny fahasambarana dia tsy azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanandramana sy fanandramana ny hakanton'ny fiainana sy fahazoana traikefa mampihetsi-po mahafinaritra. Ny fiainana dia toy ny dia iray, ary mandritra ny dia, dia tsy mitsahatra miala amin'ny teboka iray mankany amin'ny teboka iray hafa isika, ary manome antsika ny zavatra rehetra, dia ny fiarahamonina.
Manolo-tena izahay amin'ny fampiasana vokatra tsara kalitao kokoa, azo antoka, manimba ary maharitra kokoa hanomezana ny mpanjifa fiaraha-miasa sy serivisy maharitra. Miaraka amin'ny fahatsiarovanay ny fonosana maitso dia misafidy fitaovana tsara kokoa hanovana ny tontolo iainana isika ary mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ara-pahasalamana ny tontolon'ny tany.
Asa amin-kitsimpo, fahamendrehana, asa mafy, fianarana ary fanavaozana
Ny olona tsy misy fahatokisana ary tsy miorina, ny orinasa tsy misy fahatokisana dia tsy hahatratra. Ny fidiran'ny tena, ny fitondran-tena no tompon'andraikitra, ny fitsipiky ny fitondran-tena dia bebe kokoa, ny fahamendrehana dia ny toetrantsika tsara chunkai, isika chunkai dia mitovy foana ny fahitana, ny marina ary mitana ny teny fikasana. .Ny orinasa dia mitaky ny mpiasa rehetra ho olo-marina sy mendri-pitokisana. Ny fidirana dia ny fitondrantenan'ny olona chunkai, ny fomban'ny olona chunkai manao zavatra. Ny asa mafy dia karazana toe-tsaina mpandraharaha, izany hoe, amin'ny tolona misy fahasahiranana sy fahasahiranana, mandrosoa, mandrosoa, orinasa mafy. Ny asa mafy dia fanoloran-tena, izany hoe, ho tombontsoan'ny orinasa vonona handray anjara. Sambatra dia ilay lehilahy afaka manohy ny asany hatrany am-boalohany. Tokony hihazona ny fanahin'ny fianarana sy ny fanavaozana isika, tsy hilefitra amin'ny toe-javatra ankehitriny, hieritreritra amin'ny ho avy, hitazona ny fandrosoana isan'andro, ho an'ny fampandrosoana maharitra ny orinasa miaro ny fahombiazan'ny ady.